Uchiphize izinyembezi zenjabulo uShauwn othembisa 'isinongo' kwiPremiership - Impempe
Uchiphize izinyembezi zenjabulo uShauwn othembisa ‘isinongo’ kwiPremiership
May 17, 2021 May 17, 2021 Impempe.com
‘Ngithe kubona ngibanika imvume yokuthi namuhla baphume ‘bayobulala’ ngoba uma bengabulali namuhla ‘bazobulawa’.” Lawa ngamazwi kaShauwn Mkhize weRoyal AM awasho ngemuva kokuthi iqembu lakhe lishaye i-University of Pretoria ngo 2-1 emdlalweni weGladAfrica Championship ngempelasonto.
Kulo mdlalo iRoyal AM ike yalandela emuva ngo 1-0 kodwa yavuka yazithatha ngesiwombe sesibili. Ukuwina kweRoyal AM, yaKwaZulu-Natal, kwenza ukuthi ishode ngephuzu elilodwa kuphela ukuze ibe ngompetha beGladAfrica Championship ka-2020/2021.
Munye kuphela umdlalo osele phambi kokuthi kusongwe isizini. UMkhize uzwakale ejabule ngemuva komdlalo futhi kuyacaca ukuthi akasakuboni okuzobavimba ukuthi badlale kwiDStv Premiership ngesizini ezayo.
“Iyodwa into enganginitshela yona ngeqembu lami, sibumbene. Sihlale sisho ukuthi uma sibumbene sizophumelela kodwa uma siyinhlakanhlaka kuzophela ngathi.
“Ngibatshelile namuhla ngathi ayihlome ihlasele, ngathi ngibanika imvume yokuthi baphume ‘bayobulala’ ngoba uma bengabulali namuhla ‘bazobulawa.’
“Uma namuhla ningenzi okufanele lokho kusho ukuthi anifuni ukuba ngompetha. Kumele niphume niyolwa njengompetha. Abafana bangenze ngaziqhenya namuhla… angazi nokuthi ngithini, ngemuva komdlalo benginesibibithwane, ngikhalile kancane ngoba angikholwa ukuthi senze lokhu,” kusho uMkhize obezwakala eneme kakhulu.
Emdlalweni wokugcina iRoyal AM izobhekana neCape Town All Stars eChatsworth Stadium, ngeSonto ngo-3 ntambama. Maningi kakhulu amathuba okuthi iqukule indebe ngemuva kwalo mdlalo. UMkhize uthe sebekulungele ukudlala kwiDStv Premiership yize engafunanga ukuchaza izinto eziningi mayelana nalokho.
“Ngicabanga ukuthi sizovuvuzela isinongo esithile (uma kwenzeka sinyukela kwiPremiership). Ngicabanga ukuthi igazi elisha lizongena eqenjini, u-Andile (Mpisane) usemncane, uzoletha igazi elisha, uzoletha okuhlukile, igazi elisha nosihlalo osemncane, uma kwenzeka,” kuphetha uMkhize.
U-Andile Mpisane yena uthe: “Angazi ukuthi ngithini. Lo mdlalo besiwudinga kakhulu. Abantu babonile ukuthi besishaywa kulo mdlalo kodwa senza ngayo yonke indlela ukuthola amaphuzu amathathu. Ngibatshelile namuhla ukuthi singompetha ngakho kumele silwe ngayo yonke indlela.”
Previous Previous post: Uvume amava ezimbangi ezimbukise izithende uMathanga
Next Next post: Lixhawulwe ngesheke lesizumbulu iqembu leMotsepe League eMsinga
One thought on “Uchiphize izinyembezi zenjabulo uShauwn othembisa ‘isinongo’ kwiPremiership”
Vusi Ntshiza says:
Siyabonga kwi impempe ekhala kuzwakale ngokusilethela ezinoju Ebola likanobhutshuzwayo. Sithi phambili nge mpempe.